Daawo: Xildhibaan Sheegay in uu ka laabtay“ saxiixa Mooshin Farmaajo laga waday ? – Warfaafiye:
Daawo: Xildhibaan Sheegay in uu ka laabtay“ saxiixa Mooshin Farmaajo laga waday ?
Editor Super Dec 14, 2017 0
Iyadoo maalmihii u dambeeyay uu isa soo tarayay hadal heynta ku aadan inuu jiro olole mooshin oo laga wado Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, kaasoo saxiixiisa ka socday magaalada Muqdisho ayaa Xildhibaankii u horeeyay sheegay inuu ka laabtay saxiixa mooshinkaas
Xildhibaan C/llaahi Shaacir oo ka mid ahaa Xildhibaanada saxiixay mooshinka ayaa ku dhawaaqay inuu go’aansaday inuu ka laabto mooshinkaas, isagoo eegayo xaalada uu dalka ku jiro.
“Waxaan halkan ka cadeynayaa in aan dib uga laabtay Mooshinka aan saxiixay saddex cisho ka hor, markii aan ku degdegay, waxaa uga laabtay markii aan arkay duruufaha uu dalka ku jiro, gaar ahaan, amniga, dhaqaalaha, iyo qalbi wanaaga Madaxweynaha”ayuu yiri Xildhibaan Shaacir.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inay jiraan cadaw gudaha iyo dibadda oo doonaya inay dhabar jebiyaan Madaxweynaha, isagoo xusay in dalka u baahan yahay xasilooni siyaasadeed.
Xildhibaan Shaacir ayaa ugu baaqay Xildhibaanada saxiixay mooshinka inay ka laabtaan, isla markaana dowladda cusub ee halka sano jirta la siiyo fursad.
Waa markii u horeysay oo Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka uu sheego inuu ka laabtay mooshin uu saxiixay oo ka dhan ah Madaxweynaha, waxaana la ogeyn waxa ay ka bedeli doonto ololaha mooshinka ee laga dareemayo magaalada Muqdisho, kaasoo la sheegayo in Xildhibaano badan ay saxiixeen.
Daawo Shirka jaraa’id ee Xildhibaan Shaacir.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo ku dhegan wasiir Beyle kuna haayo baaritaan
Sawirro: Furitaanka safaaradda Mareykanka ee Qudus iyo Falastiiniyiinta
End. Yariisoow oo taageere ka raadsaday odayaasha dhaqanka Muqdisho
Xeradii Imaaraadka ka baxeen oo shirkad ajnabi ah lagu…
Wararka dagaalka Tukaraq ee Somaliland iyo Puntland